भूमिहीन अतिविपन्न दलितले जमीन पाउने - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७६ असार २० गते ११:५० मा प्रकाशित
सरकारले भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायलाई आवासका निम्ति भूमि उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न अति विपन्न समुदायका दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउन लागेको हो । कति जमीन उपलब्ध गराइने हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजित विधेयकअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसद रामप्रीत पासवानले उठान गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायले आवासका लागि जमीन पाउँछन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति र नियम तयार गर्दैछ । यो छिट्टै आउँछ ।”
डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिकामा रहेका अति लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराएको एक÷एक बिघा जमीनको लालपुर्जा बैंकमा राखी उनीहरुले कारोवार गर्न पाएका छैनन् ? यसतर्फ सरकारको के धारणा रहेको छ ? भन्ने सांसद चक्रप्रसाद स्नेहको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले तत्कालीन सरकारले जोतभोगका लागि मात्र जमीनको स्वामित्व उपलब्ध गराएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।
उहाँले गुठीलाई संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको चर्चा गर्दै यसको भावना र मर्मलाई जीवन्त बनाइराख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्नुभयो ।
मन्त्री अर्याललले भन्नुभयो, “कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । उनीहरुको आम्दानी बढाउन आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।” उहाँले भूउपोग नीति तथा ऐन संसद्मा नै विचाराधीन रहेको, ३६५ स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार भएको, मालपोत प्रशासन आधुनिक सूचना प्रविधिमा सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री अर्याललले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयलाई आर्थिक अभाव हुन नदिइने जानकारीसमेत दिनुभयो ।
विनियोजित विधेयकअन्तर्गत युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले एक स्थानीय तह एक खेलग्राम बनाइने नीति मन्त्रालयको रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले काठमाडौँसहित देशका ठूला शहरमा खेलकूदका पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडीलाई मासिक सुविधाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री विश्वकर्माले युवा वर्गको क्षमता तथा आयआर्जनमा बढाउन सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिका तहमा बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खेलकूदको पूर्वाधार विकास र खेलाडीको क्षमता विकासमा सरकारले अगामी दिनमा थप लगानी गर्नेछ । तराई÷मधेशमा क्रिकेटको ‘हब’ बनाइनेछ ।”
मन्त्री विश्वकर्माले खेलकूदलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसित जोड्ने नीति सरकारको रहेको जवाफ दिँदै कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा खेलकूदको समग्र विकासमा ध्यान गएको छ भन्नुभयो ।